လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်သောဂိမ်းများ: အနီရောင်တံခါး, အဝါရောင်တံခါး
ပင်မစာမျက်နှာ	ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း	လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်သောဂိမ်းများ: အနီရောင်တံခါး, အဝါရောင်တံခါး
by Waylon ဂျော်ဒန် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2020
by Waylon ဂျော်ဒန် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2020 34,154 အမြင်များ
ဂိမ်းတစ်ခုကစားကြရအောင် - Red Door, အဝါရောင်တံခါး
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကစားနည်းများနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော Spooky ဂိမ်းများသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိငိုက်မျဉ်းနေသောပါတီများတွင်အဓိကကျသည်။ မှ ပျဉ်ပြားကဲ့သို့ခိုင်မာသောအမွေးကဲ့သို့အလင်းသည် ... စိတ်တံခါးများ
အဆိုပါဂန္မှ Ouija ဘုတ်အဖွဲ့, ငါတို့ရှိသမျှသည်အနည်းဆုံးတ ဦး တည်းကစားခဲ့ကြပေမယ့်အခြားအထွက်ရှိပါတယ်အခြားလူလည်းမရှိ, ဖြစ်ကောင်းလူသိများနှင့် spookiest တစ်ခုဖြစ်သည် Red Door, အဝါရောင်တံခါး. စိတ်တံခါးများ
Red Door အဝါရောင်တံခါးကဘာလဲ?
တခါတရံဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဂိမ်းဟုခေါ်သည် စိတ်တံခါးများ or အနက်ရောင်တံခါး၊ အဖြူရောင်တံခါးအခြားအရောင်များကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။
Red Door, အဝါရောင်တံခါး ကစားရန်နှစ်ခုကြာပါသည်။ သို့သော်ညနက်နက်မှကြောက်လန့်နေသောဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာမူဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည်“ အနီရောင်တံခါး၊ အဝါရောင်တံခါး၊ အခြားအရောင်တံခါးများ” ဟူသောစာသားလှည့်လည်မှုဖြင့်ဘာသာရပ်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုထပ်ခါထပ်ခါ နှိပ်၍ ဂိမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမျက်မြင်သက်သေများကပူးပေါင်းပါဝင်သင့်သည်။ စိတ်တံခါးများ
လမ်းညွှန်၏အသံနှင့်လမ်းညွှန်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုသည့်အကြောင်းအရာ၏အသံမှလွဲ။ အသံမျှမရှိစေခြင်းငှါ, မျက်မြင်သက်သေများအားလုံးတိတ်ဆိတ်စွာနေသင့်သည်။
သင်တန်းပို့ချသူသည်အခန်း၏မည်သည့်အရောင်များ၊ တံခါးများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မည်သို့ခံစားရသနည်းဟုမေးပြီးအခြားအခန်းများသို့ကွဲပြားသောတံခါးများသို့သွားရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
သင်လိုသည့်နေရာတိုင်းသို့သင်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်တက်သည်ထက်တက်ခြင်းသည် ပို၍ လုံခြုံသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အခန်းထဲတွင်ပိတ်မိနေလျှင်သင်နိုးရန်ကြိုးစားရမည်။ အကယ်၍ သင်မလုပ်ခဲ့လျှင်၊
ညာဘက် creepy အသံ?!
၏တပြင်လုံးကိုအမှတ် Red Door, အဝါရောင်တံခါးမင်းထင်မြင်ချက်သည်သင်၏စိတ်အတွင်း၌အလုပ်လုပ်ပုံကိုစူးစမ်းရန်နှင့်လူတိုင်းအတွက်မှောင်မိုက်သောနှစ်ဖက်ရှိကြောင်းကိုလည်းနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
မင်းကစားဖူးလား Red Door, အဝါရောင်တံခါး သို့မဟုတ်ဤ spooky ဂိမ်းမဆိုမူကွဲ? ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!